Warar - Sida loola macaamilo kala-soocidda foojignaanta ee xuubka osmosis
Nidaamka osmosis-ka ee gadaal waa qayb lagama maarmaan u ah qalab daaweyn biyo nadiif ah oo dhexdhexaad ah oo yar yar iyo mid dhexdhexaad ah, laakiin sidoo kale waxaa jira khatar qarsoon oo ku jirta nidaamka osmosis-ka dambe, taas oo ah, dusha sare ee xuubka osmosis-ka waa fududahay in la sameeyo kala-soocid feejignaan ah ama walxo kale oo la haysto, taas oo saameyn ku yeelan doonta tayada qulqulka qalabka daaweynta biyaha.
1. Kordhinta habka xawaaraha
Ugu horreyntii, waxaan qaadan karnaa tallaabooyinka inta badan loo isticmaalo warshadaha kiimikada si loo kordhiyo khalkhalka. Taasi waa, isku day inaad kordhiso xawaaraha toosan ee dareeraha ku qulqulaya dusha xuubka. Waqtiga xayeysiinta ee solute waxaa lagu yareyn karaa iyadoo la yareeyo waqtiga deganaanshaha dheecaanka iyo kordhinta xawaaraha dareeraha ee qalabka daaweynta biyaha saafi ah oo heer sare ah oo dhexdhexaad ah.
2. Habka wax lagu rakibo
Tusaale ahaan, 29 ~ 100um goobo ayaa la galiyaa dareeraha la daaweeyay waxayna ku qulqulayaan nidaamka osmosis-ka si wada jir ah si loo yareeyo dhumucda lakabka xadka xuubka oo loo kordhiyo xawaaraha gudbinta. Waxyaalaha kubbadda ayaa laga samayn karaa muraayad ama methyl methacrylate. Intaa waxaa sii dheer, nidaamka sambabada osmosis tubular, kubbadda isbuunyada yar ayaa sidoo kale lagu buuxin karaa dareeraha quudinta. Si kastaba ha noqotee, loogu talagalay saxanka iyo noocyada qaababka xuubka xuubka, habka loogu daro fillerku kuma haboona, badanaa sababta oo ah halista xannibaadda marinka socodka.
3. Habka garaaca wadnaha
Matoorka garaaca wadnaha ayaa lagu darayaa habka qalabka daaweynta biyaha. Weynaanta iyo inta jeer ee garaaca wadnaha way kala duwan yihiin. Guud ahaan, weynaanta kororka ama soo noqnoqoshada, waxaa sii kordhaya xawaaraha socodka. Agitators ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhammaan aaladaha baaritaanka. Khibraddu waxay muujineysaa in isuduwaha wareejinta ballaaran uu xiriir qumman la leeyahay tirada kacdoonka kiciyaha.
4. Ku rakibida dhiirrigeliye qaska
Dhiirrigeliyeyaasha qalalaasaha waa caqabado kala duwan oo xoojin kara hannaanka socodka. Tusaale ahaan, qaybaha tubular-ka, baffles wareega ayaa lagu rakibay gudaha. Saxanka ama moduleka xuubka nooca duubka ah, mesh-ka iyo qalabka kaleba waa la safan karaa si kor loogu qaado kacdoonka. Saamaynta dhiirrigeliye qalalaasaha waa mid aad u wanaagsan.
5. Ku dar ka hortagga cabirka
Si looga hortago xuubka dambe ee osmosis-ka inuu ku fido qalabka daaweynta biyaha, sulfuric acid ama hydrochloric acid ayaa lagu darayaa si loo hagaajiyo qiimaha pH. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah qashin iyo daadashada nidaamka asiidhka, hawlwadeenku wuu dhib qabaa, sidaa darteed ka hortagga miisaanka kala-baxa ayaa guud ahaan lagu daraa si loo ilaaliyo hawlgalka caadiga ah ee nidaamka daaweynta biyaha.